Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : /bins/ohabolana/antitra.mg.aj
Ohabolana Ambarivatry : antitra vao mikorinteana. [Cousins 1885 #121]
Ohabolana Ampemby : antitra vao mitsiky vazana. [Veyrières 1913 #1799, Cousins 1885 #150]
Anantsinahy lavitr’ olona, ka antitra eo am--pijoroana. [Cousins 1885 #160]
Ohabolana Ankizy toa misy ambiny, lehibe toa tsy ampy kely, ohatra ny antitra nahazo bodokely. [Rinara 1974 #285]
Ohabolana Antidahin-dambo, antitra am-pandrembezana. [Samson 1965 #A85]
Antitra fahanan-kanina, ka na atao voky hatenda aza, mbola manjoko ihany. [Veyrières 1913 #1802, Cousins 1885]
Ohabolana Antitra manara am--pandriana: mivoady ny masoandro hiseho. [Veyrières 1913 #1803, Cousins 1885 #247]
Antitra natonton’ olona : zara raha mahatana ny ainy. [Veyrières 1913 #1804, Cousins 1885 #248]
Ohabolana Avelao ho antitry ny ditrany izy. [Veyrières 1913 #6342]
Ohabolana Aza adala lava ohatra ny valalanamboa : mandrak' antitra ka mitsipika ihany. [Rinara 1974 #362]
Aza adala lava toa valalan' amboa : mandrak' antitra mitsambikimbikina ihany. [Veyrières 1913 #2062, Cousins 1885]
Ohabolana Aza manao toy ny voavahy : tanora, manani-kazo ; antitra, vao mikorintsana. [Veyrières 1913 #1807, Cousins 1885 #528]
Ohabolana Be ny tanora natao tsy hivaona fa nony antitra niady lohalika. [Rinara 1974 #881]
Be ny tanora natao tsy hivaona, fa raha antitra miady lohalika. [Cousins 1885 #759, Nicol 1935 #111]
Tsy misy tanora natao tsy hivaona, fa rehefa antitra miady lohalika. [Rinara 1974 #4743, Cousins 1885 #3543]
Ohabolana Dihin' antitra ka ny tana-milantsika an-daniny, ny ranomaso koa an-daniny ihany. [Rinara 1974]
Ohabolana Ditran' antitra. [Veyrières 1913 #6399]
Fisoitr' afom-bavy antitra: hita alika, kapohina; mandroatra ny vary, haroina aminy indray. [Cousins 1885 #969]
Ohabolana Hoditra azon' antitra : tsy hanina fa tanontanonina foana. [Veyrières 1913 #1814]
Hoditra azon’ antitra : tsy hanina, fa tanontanoniny foana. [Cousins 1885 #1090]
Ohabolana Izay mahia zokin' antitra. [Veyrières 1913 #1818, Rinara 1974 #1498]
Ohabolana Izay mandroboka indroa manana antitra. [Veyrières 1913 #5268]
Toy ny nato: izay manoboka indroa manana antitra. [Cousins 1885 #3216]
Toy ny nato: izay manoka indroa manana antitra. [Cousins 1885 #3216]
Toy ny kalon' antitra : tany no farany. [Veyrières 1913 #1867, Cousins 1885 #3203, Nicol 1935 #232]
Ohabolana Katsaka lavi-tanàna : raha antitra lanin' ny goaika. [Rinara 1974 #1606, Cousins 1885 #1235, Veyrières 1913]
Ohabolana Ketsa va aho ka ho antitra iray taona? [Houlder 1895 #820, Cousins 1885 #1260]
Ohabolana Korodona an’ i Boso ; antitra mahefa. [Samson 1965 #K27]
Lahy antitra kendam-body akoho : mahazo fanjakana vao mivadi-boamaso ; tonga ny valim-pitia vao voa totohondry any an-katony. [Cousins 1885]
Ohabolana Lahy antitra mampirafy : homan-droa trano vao ranga sofina. [Cousins 1885 #1292, Rinara 1974]
Ohabolana Lahiantitra manao lelik’ asa ka mosaren' ny hafetseny. [Rinara 1974 #1674, Houlder 1895]
Lahy antitra manao lelik’ asa : matin’ ny hafetsena. [Veyrières 1913 #1822, Cousins 1885 #1294]
Lahy antitra manin-kavana: hitsinjo, tsy mahita ; handeha, tsy afaka. [Houlder 1895 #1954, Cousins 1885 #1295, Veyrières 1913]
Lahy antitra nisondro-nifin’ ny henan-kisoa: voky menaka vao tsy mahakombom-bava. [Cousins 1885 #1297, Rinara 1974]
Ohabolana Lahiantitr' Imamo : manao tsy mahomby, mihinana atosika ihany. [Rinara 1974 #1678]
Lahy antitr' Imamo : manao tsy mahomby, nefa homana atosika ihany. [Veyrières 1913 #1827, Cousins 1885]
Ohabolana Lamban' antitra : tsy ilana izay rendrarendrany intsony, fa ny mafy ihany no tsara. [Veyrières 1913 #1829, Cousins 1885]
Ohabolana Malaina hatry ny fahazaza, ka ory mandraka antitra. [Rinara 1974 #1926]
Manaram-po fahazaza, ka maka kitay fotsy volo. [Cousins 1885 #1566, Nicol 1935 #189]
Dikanteny frantsay Un enfant trop dorloté finit par ramasser des fagots quand il a des cheveux blancs. [Nicol 1935 #189]
Ohabolana Manampontsampona hoatry ny fatin' antitra. [Veyrières 1913 #1830]
Ohabolana Manaraka am-bokony, tahaka ny vavy antitra miandry ombilahy. [Cousins 1885 #1564]
Ohabolana Mandalo dia raikitra ohatra ny tsipolitra antitra. [Rajemisa 1985]
Mandroroa toy ny mason' antitra. [Veyrières 1913 #1836, Cousins 1885 #1600, Houlder 1895]
Ohabolana Manjohizohy mihafihafy ohatra ny antitra mahantra. [Rinara 1974]
Ohabolana Mihena an-toerana karaha fen’ antitra. [Samson 1965 #M112]
Ohabolana Mitabataba hoatry ny voanjo am-bavan' antitra. [Veyrières 1913 #1839]
Mitabataba, ohatra ny voanjo am--bavan’ antitra. [Cousins 1885]
Ohabolana Mivezivezy, tahaka ny tsaramaso am--bavan’ antitra. [Cousins 1885 #1919]
Ohabolana Nahandro varin-dahiantitra ka masaka ihany fa tsy afa-droatra. [Rinara 1974 #2656]
Nahandro varin--dahy antitra : masaka ihany, fa tsy afa-droatra. [Veyrières 1913 #1842, Cousins 1885]
Dikanteny frantsay Manière de faire cuire le riz comme les vieillards : le riz est cuit mais l' écume n' est pas partie, parce que le feu n' est pas assez vif. [Veyrières 1913 #1842]
Fanazavana frantsay Se disait des gens sans énergie et aussi des choses faites incomplètement. [Veyrières 1913 #1842]
Ohabolana Ny antitra antitra ihany. [Veyrières 1913 #1844]
Ny tanora vato mandondona, ny antitra hazo amoron-tevana. [Rinara 1974 #3262, Cousins 1885 #2428, Nicol 1935 #163, Rajemisa 1985]
Ohabolana Ny ditra maha-kely antitra. [Veyrières 1913 #6373, Cousins 1885]
Ny ditra maha-keliray. [Houlder 1895 #409, Veyrières 1913 #6373, Cousins 1885]
Ohabolana Nifin’ antitra : niainga tsy nitoravana. [Samson 1965 #N3]
Ny fofony no anjarany, ohatra ny vavy antitra mahandro hoditra. [Cousins 1885]
Ohabolana Ny maharenin-janaka tsara anao no mavokely tsy miofo, ka hitiavan' ny vadinao anao ambaraka antitra. [Veyrières 1913 #1312]
Ny mahia, zokin’ antitra ; ny tsy manam-bato batoraka, zandrin’ olona. [Cousins 1885 #2309]
Ohabolana Ombalahy antitra. [Veyrières 1913 #6766]
Ohabolana Raiki-pitia tamin’ antitra hianao, ka mbola tia ka nilaozany maty ; fa ny manina irery no mangozohozo. [Veyrières 1913 #1781, Cousins 1885 #2732]
Ohabolana Rakitr' antitra. [Veyrières 1913 #2324]
Ratsy miafara, ohatra ny lahy antitra maka mosavy. [Cousins 1885]
Ohabolana Ratsy miafara toy ny fanoto : antitra vao kely anarana. [Veyrières 1913 #1852, Cousins 1885 #2768]
Ohabolana Resak' antitra. [Veyrières 1913 #1853]
Ohabolana Sahala amin' ny voatavo : antitra vao avadiky ny sasany. [Veyrières 1913 #1854]
Voatavo, ka antitra vao avadiky ny sasany. [Rinara 1974 #4998, Cousins 1885 #3712]
Ohabolana Sifotra antitra aho, ka tsy maha-reny vorona anao. [Houlder 1895 #1945]
Ohabolana Sifotra antitra, ka tsy mahangeza renivorona. [Cousins 1885 #2886]
Ohabolana Sifotra antitra ka tsy maha-renivorona. [Rinara 1974 #3873]
Ohabolana Sondraran’ antitra : ianin’ ny taloha. [Samson 1965 #S56]
Valalanamboa: kely, mandady ; antitra, mitsipika. [Cousins 1885 #3601]
Ohabolana Taizan' antitra. [Veyrières 1913 #1860]
Ohabolana Tanalahy manani-bero : antitra mijaiko, tanora mijaiko. [Veyrières 1913 #1711, Cousins 1885 #2993]
Ohabolana Tanora kamo, ka nony antitra : sady lava ahoriana no manilika ny nenina. [Rinara 1974 #4054]
Tanora, ratsy fihary: antitra, vao ratsy laoka. [Veyrières 1913 #1862, Cousins 1885 #3020]
Toy ny vero : tsara faniry fa ratsy antitra. [Houlder 1895 #1946, Veyrières 1913 #1868, Cousins 1885]
Ohabolana Tanora tsy kinga, ka antitra vao misanitika. [Veyrières 1913 #1863]
Ohabolana Tanora tsy nanao na inona na inona, ka nony antitra : mipitrapitra. [Rinara 1974 #4068]
Ohabolana Taolan' antitra, ka raha tapaka tsy mitohy intsony. [Rinara 1974 #4109]
Taolan' antitra : raha tapaka tsy mitohy intsony. [Veyrières 1913 #1864, Cousins 1885 #3036]
Tavin-kena am-bavan' antitra : lasa tsy antonontonony. [Veyrières 1913 #1865, Cousins 1885 #3049]
Ohabolana Toy ny fanoto: antitra vao kely anarana. [Houlder 1895 #1942, Cousins 1885 #3191]
Ohabolana Toy ny vero : tanora mandimandina, antitra main-dambana. [Rinara 1974 #4376]
Torimasom--bavy antitra : vita am--pitsongoananana ihany. [Cousins 1885]
Ohabolana Tovony manaja tanana, ka antitra vao be fitsiriritana. [Rinara 1974]
Ohabolana Tsy avelan’ ny ela tsy ho antitra. [Houlder 1895 #1938, Cousins 1885 #3340]
Ohabolana Tsy hita hatanorana ohatra ny tana : tanora midreho, antitra midreho. [Rinara 1974]
Tsy hita hatanorana, toy ny tana: antitra midreho, tanora midreho. [Veyrières 1913 #1729, Cousins 1885 #3349]
Ohabolana Tsy ny firongarongan' ny voalavo fa ny faha-kely antitry ny totozy. [Rinara 1974]
Tsipolotra: antitra vao tia sangy. [Veyrières 1913 #1869, Cousins 1885 #3325]
Ohabolana Valalanamboa : mandadilady mandrak' antitra. [Rinara 1974 #4839]
Ohabolana Vavy antitra maka kitay : midina, manahy ny tsy hahazo; miakatra, manahy ny tsy hahazaka. [Cousins 1885 #3647]
Ohabolana Vavy antitr' Imerina : andrasan-kanjoko vao mitera-dahy. [Veyrières 1913 #1941, Rinara 1974 #318, Cousins 1885 #3651]
Ohabolana Voatelina tsy satry, hoatry ny tavin-kena am-bavan' antitra. [Veyrières 1913 #1870]
Voatelina tsy satry, ohatra ny tavin-kena am--bavan’ antitra. [Cousins 1885, Rinara 1974]
Ohabolana Volombavan' antitra : hariva vao menafify. [Rinara 1974 #5020]
Zai-damban’ antitra, ka tsy mila izay rendraren-drany, fa izay hahamafy azy no atao. [Veyrières 1913 #1942, Cousins 1885 #3756]
Zaza niara-nilalao (izahay); antitra, niara-nitanin-andro, ka izay nalehany hitako avokoa. [Cousins 1885]